လေယာဉ်ပျံ safety တစ်စွန်းတစ်စ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » လေယာဉ်ပျံ safety တစ်စွန်းတစ်စ
လေယာဉ်ပျံ safety တစ်စွန်းတစ်စ
Posted by ကျော်လွင်ဖြိုး on Aug 20, 2014 in Facebook | 17 comments
ကဲ ပိတ်သတ်ကြီး ရေ
ဒီတလော ဖွဘုတ် မှာ မော်ဒယ် တစ်ယောက် ကို MAI က လေယာဉ်မောင် က လေယာဉ်အတက် မှာ ဖုန်းပိတ်ခိုင်းလို့ ဆိုပြီး မော်ဒယ် က ချဲ ထားတာ ကို ဖတ်မိကြရဲ့လားဗျ။
မဖတ်မိသေးဘူး ဆိုလဲ အတိုချုပ် က ဂလို ဗျ။
သူ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် က လေယာဉ်မောင် ပြောတာကို နားကြပ် တပ်ထားလို့ မကြားလိုက်ဘူးပေါ့။ အဲ့ဒါ ကို သူတို့က ဝိုင်းရယ် တော့ ဒါ safety အတွက် ပြောတာ ရယ်စရာ မဟုတ်ပါဘူး လို့ ပြောသတဲ့။ ဒါက တကြောင်း
နောက်ပြီး ဖုန်းကို Airplane mode လုပ်ထားတယ် ဆိုတာကို ပါဝါ ပိတ်ပေးပါ လို့ ပြောတာကို ဘယ် လေကြောင်းလိုင်း ကမှ အဲ့ဒီလို မပြောဘူးပေါ့လေ။
ဒါကို အောက်က ကောမန့် တွေက ထုံးစံ အတိုင်း ဝိုင်း ဆွမ်းကြီးလောင်းထားကြသပေါ့ဗျာ။ လေယာဉ်မောင် နဲ့ လေကြောင်းလိုင်း ကို ဆွမ်းကြီးလောင်းတာကို ပြောတာနော်.. မော်ဒယ်ဂဲလ် ကိုတော့ ဘယ်သူက ရွှေစိတ်တော် ငြို အောင် လုပ်လိမ့်မတုန်း။
ဒီ ဆွမ်းကြီးလောင်းတာတွေ က ထားတော့။
ဒီမှာ မေးစရာ ရှိလာတာက ဘာလို့ လေယာဉ် အတက်အဆင်း မှာ mobile devices တွေကို ပါဝါပိတ်ခိုင်းရသလဲ နောက် ဘာလို့ လေယာဉ်မှန်ပြူတင်း တွေ ချထားတာ ရှိရင် ပြန်တင် ခိုင်းရသလဲ ဆိုတာပါ။
အရင်တုန်းက အဲ့ဒါတွေ မသိခဲ့ဘူးဗျ။ သူတို့ ဖုန်းပိတ်ခိုင်း ပြူတင်းမှန် တင်ခိုင်းလို့သာ လုပ်လိုက်ရတယ်။ ဘာတွေလဲဟ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ပါ။
အဲ့ဒီ ၂ခု ကို ဖွဘုတ်မှာပဲ သူများ တွေ ပြန် ရှင်းပြ ထားတာ တွေ့ရလို့ ဒီထဲ မှာ ပြန် ရှဲ လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Credit Ko Charming Aung
လေယာဉ် အတက်နဲ့ အဆင်းဟာ လေယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းမှာ အန္တရာယ် အများဆုံးအချိန်တွေပါ။ ဖြစ်ခဲ့သော လေယာဉ် ပျက် ကျသော အဖြစ်အပျက်အများစု ဟာ လေယာဉ်အဆင်းမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒုတိယအများဆုံး က လေယာဉ်အတက်မှာဖြစ်တာပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မောင်မယ်တွေ ဟာ ခရီးသည်တွေ မကြိုက်မှန်းသိပေမဲ့ လိုက်ပြောနေ ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ ကြုံခဲ့ ရင် အသက်ရှင်နိုင်ရေး အတွက်လိုက်ပြောတာပါ။
လေယာဉ် ပြူတင်းပေါက်နေကာတံခါးများ ကို ဖွင့်ခိုင်းခြင်း
နေပူ နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် လေယာဉ် အတက်နဲ့အဆင်းမှာ ပြူတင်းပေါက်နေကာတံခါးများကိုဖွင့်ခိုင်းပါတယ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေ(လေယာဉ် အင်ဂျင် မီးလောင်ခြင်း) ကို မြင်နိုင်ပြီး လေယာဉ်မှူးကြီးကို ကြိုတင် အသိပေးလို့ရပါ ခြင်း
အရေးပေါ် လေယာဉ်ဆင်းသက်ပြီး ပြင်ပြအခြေအနေကို သိရှိနိုင်ခြင်း (ပြင်ပမှာ အန္တရာယ် ရှိ မရှိ ကြည့်ကာ ချက်ခြင်း လေယာဉ်အားစွန့်ခွာသင့် မသင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း
ပြင်ပတွင် အန္တရာယ်ရှိပါက ခရီးသည်မှ လေယာဉ်မောင်မယ်အား အကြောင်းကြားနိုင်ခြင်း
လေယာဉ်တံခါး ကို ပုံမှန်အခြေအနေမှာဖြစ်စေ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာဖြစ်စေ ဖွင့်ရန်အတွက် ပြင်ပ တွင် အန္တရာယ် ရှိမရှိသိရှိနိုင်ခြင်း
စသော အကြောင်းများ ကြောင့် ဖွင့်ထားခိုင်းခြင်းပါ။
လက်ကိုင်ဖုန်းများ mp3 mp4 ipad စသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်း များ အား လေယာဉ်အတွင်းအသုံးပြုသော Flight mode ဖြစ်နေစေပါမူ ပိတ်ခိုင်းခြင်း
Signalling device တွေ က ထုတ်လွှင့်သော ရေဒီယို လှိုင်းတွေဟာ လေယာဉ် အတော်များများရဲ့ လေကြောင်းထိမ်းသိမ်းရေး ကိရိယာတွေကို အနှောက်အရှက်ဖြစ်စေတဲ့ အတွက် အန္တရာယ်အများဆုံး အချိန် ၂ချိန်မှာ ပိတ်ခိုင်းထားခြင်းပါ။
ဖုံး signal ဟာ အမြင့်ပေ ၃ သောင်းကြော်မှန်ပျံသန်းနေချိန်မှာ မမိပါဘူး ဒါပေမဲ့ Flight mode မဟုတ်ရင် ဖုန်း ဟာ ရသမျှ signal ကို လိုက်ဖမ်းသလို သူကလဲ signal ပြန်ထုတ်ပါတယ်။
တစ်ခါ Hongkong အသွားလေယာဉ် က နှိမ့်ဆင်း ပြီး အနိမ့်ပိုင်းရောက်ချိန်မှာ ဗလယာဉ်မှူးက ခေါ်ပြီး လူတစ်ယောက် ဖုန်းသုံးနေပုံ ရကြောင်းလိုက်ရှာပြီး ပိတ်ခိုင်းပါတယ်။
အဲဒီဖုန်းကြောင့် လေကြောင်းပြ ကိရိယာ က Error တက်ပြီး လေကြောင်း က3to5ဒီဂရီလောက် လွဲနေဘို့ပါပဲ။
မြေပြင်ပေါ်မှာ ၃ဒီဂရီဟယာ ဘာမှ မဖြစ်လောက်ဖူး ထင်မှာပါ။
ဒါပေမဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာတော့ အရမ်း အန္တရာယ်များပါတယ်။
Flight Mode လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီး သေချာ FlightMode ဖြစ်သလား မဖြစ်သလားဆိုတာ ပြောနိုင်ပါသလား။
Flight Mode နဲ့ MP3တို့ MP4 တို့နားထောင်ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်ပေမဲ့ လေယာဉ်ဆင်းချိန်မှာ အာရုံ စူးစိုက်မှု ကို Safety မှာသာရှိစေချင်လို့ ပိတ်ခိုင်းတာပါ။
mp3 တို့ mp4 တို့ Game တို့ သုံးနေချိန်မှာ မိမိအာရုံဟာ လွင့်ပါးနေတဲ့ အတွက် ရုတ်တရက် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြုံလျှင် ချက်ခြင်း ဘယ်လိုမှ တုန့်ပြန်လို့မရနိုင်ပါဘူး။
နောက်ပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေကြုံကြောင်း လေယာဉ်မောင်မယ်တွေ က အော်ပြောနိုင်ပေမဲ့ နားမှာ နားကြပ်ကြီးဆို့ပြီး ကျယ်လောင်စွာနားထောင်နေသူအနေနှင့်မကြားနိုင်ပါ။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာများဟာ ဒီလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ အားလေယာဉ် အဆင်းနဲ့ အတက်မှာပိတ်ခိုင်းရခြင်းရဲ့ အကြောင်း တစ်ချို့ပါ။
လေယာဉ်မောင်မယ်တွေ ဟာ သင်တို့ တတွေ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြုံချိန်မှာ အသက်ရှင်နိုင်ရေး ဘေးကင်းစွာ လေယာဉ်ပေါ်မှဆင်းသွားနိုင်ရေးအတွက် သင်တို့ မကြိုက်မှန်းသိရဲ့သားနဲ့ လိုက်ပြောပေးတာပါ။
၈၈ခုနှစ်မှာ မွေးသည်။ အပြောအဆို အနေအထိုင် ဂွကျသည်။ လွန်စွာ အပျင်းကြီးသည်။ လူများနဲ့ ပြောင်းပြန် တွေးလွန်းသောကြောင့် လမ်းထွက်လျှင် သံခမောက် ဆောင်း ထွက်ရသည်။
View all posts by ကျော်လွင်ဖြိုး →
လိုအပ်လို့ လုပ်ပေးလိုက်ရတာ ဘာ အပန်းကြီးလို့ ကက်ကက်လန်နေကြလဲ။
ကိုယ်နားမလည်တဲ့ နည်းပညာ ကို နားလည်အောင်တော့ မလုပ်ပဲနဲ့။
လေယာဉ် အတက် အဆင်း မှာ Airplane mode နဲ့တင် ဘာလို့ မရတာလဲ ဆိုတာရယ် မှန်ပြူတင်း တွေ ဘာလို့ ချထား ရတာလဲ ဆိုတာရယ် ကို ကျနော်လဲ ခုမှ သိတာ ဗျ။း)
သူတို့ က safety အတွက် လိုအပ် တယ် ဆိုလို့ သာ လုပ်ပလိုက်ရတာ ဘာကြောင့်ရယ် မသိတော့ ခိုးလိုးခုလု ပဲ စိတ်ထဲမတော့ (သိချင်တာကို ပြောပါတယ် လုပ်ခိုင်းရလားလို့ မကျေနပ် တာ မဟုတ်ပါဘူး)။
ခုလိုလေး သိလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲ တမျိုး ရှင်းသွားတာပေါ့။
သိအောင် မကြိုးစားဘဲ ဘလိုင်းကြီး ချဲတာမျိုး ကျမှ လေယာဉ်တစ်စီးလုံးစာ အန္တရာယ်ကြီးရယ်။
ကိုယ်သိထားတဲ့ ဗဟုသုတကို မျှဝေပေးလိုတဲ့ ကိုဂျက်ရဲ့စေတနာကို အသိအမှတ်ပြု ..လေးစားတဲ့အကြောင်းလေး လာပြောတာပါခင်ဗျာ
ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပါ ကိုနုထွားကြီး ရယ်…
သဘောထားလေး နည်းနည်း ပိုကြီးဖို့လိုပါကြောင်းးး
ပုံမှန် တစ်ကျပ်ဖိုး သဘောထားကြီးရင် တစ်ကျပ်ခွဲဖိုးလောက် အဆစ်အနေနဲ့ သဘောထားကြီးကြရင်. . .
လူတွေက စန်းစန်းတင့် အလွန်ဖြစ်လာတယ် ထင်ပါကြောင်း
ပုံမှန် တစ်ကျပ်ဖိုး သဘောထားကြီးရင် အခု ပြားရှစ်ဆယ် ဖိုးလောက်သာ ကျန်တော့တယ် ထင်ပါကြောင်း။
Mr. MarGa (12512) says:
ဘယ်အချိန်ကတည်းက လေယာဉ်မောင်/မယ် တွေကို ကြည့်မရဖြစ်နေမှန်းမှ မသိတာ
အဲဒီတော့ အကွက်ဝင်တာနဲ့ ဆော်မကွ ဆိုပြီး ထ အော်ကြတာတွေ
အဲ… အံမဝင်ဘဲ အံချော်သွားတာလေးတစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိတယ်
comments တွေကလဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
လေယာဉ်မောင်မယ် တွေဟာ လေယာဉ်ပေါ်က စားပွဲထိုး အဆင့်ပဲ ရှိတာပါတဲ့း)
ဒါဆို ပိုင်းလော့တွေကို လေယာဉ် ဒရိုင်ဘာ လို့များ ခေါ်မလား မသိ။း)
……လေယာဉ်မောင်မယ် တွေဟာ လေယာဉ်ပေါ်က စားပွဲထိုး အဆင့်ပဲ ရှိတာပါတဲ့လား…..
အောင်မလေးလေး …ရင်ကျိုးရချည်ရဲ့ …..ပြင်သစ်က MBA ဘွဲ့ကြီယူလာတဲ့ ဟိုလေကြောင်းလိုင်းက လေယဉ်မယ်ချုပ်ကြီးကြားရင်ဘယ်လိုနေမလဲမသိ….အဟိဟိ
သူများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်ကို
ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ပြောတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်တွေ အများကြီးအေ့။
ကိုဖက်ရေးတဲ့ ပို့(စ) ၂ ပုဒ်ရှိဖူးတယ်။ ပြီးမှ ပြန်ရှာပေးပါအူးမယ်အေ။
Personal ရယ် မကွဲပြားကြဘူးး။
Professional နှင့် Personal- ကြောင်ဝတုတ်
Privacy & Transparency- ကြောင်ဝတုတ်
ဖြစ်တာက ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းက အရပ်နိမ့်လို့
လေယာဉ်မှာ ပစည်းထည်ပြီး ပြန်ပိတ်တာမမှီလို့
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်အချဉ်ပေါက်ပြီး
လေယာဉ်ဆင်းချိန်ထိ အဲဒီလေယာဉ်မယ် မောင်းခန်းက ထွက်မလာတော့ဘူး
ကနေ့ မူရင်း ပို့စ် ပိုင်ရှင် အကိုကြီး ထပ်ရေးလို့ ဒီထဲ မှာ ထပ် ရှဲပါတယ် ခည။
ဘာကြောင့်လဲ များ အမှတ် ၂
လေယာဉ်အတက်အဆင်းတွင် ခရီးသည်တို့၏ အိတ်များကို မိမိတို့ ထိုင်ခုံရှေ့ဘက်အောက်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းရခြင်း
လေယာဉ် တက်ချိန်ဆင်းသက်ချိန်မှာ အိတ်တွေ ကို သိမ်းခိုင်းရတာ ဟာ ကျွန်တော်တို့ လေယာဉ်မောင်မယ်များအနေနဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေကြုံ ချိန် တစ်နည်း ပြောရသော် ရုတ်တရက်လေယာဉ် ကဆင်းရင်းပျက်ကျခဲ့ရင် သေသေချာချာ မသိမ်းထားသော၊ ပေါင်ပေါ်တွင် တင်ထားသော အိတ် သေးသေးလေး ဟာ သင့်အားမေ့ လဲသွားစေ နိုင်သလို ဒဏ်ရာ အနာတရဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကို မြင်သာအောင်ပြောရရင် paper cut (စာရွက်ကြောင့် ပျတ်ရှခြင်း) ကိုကြားဖူးပါသလား။ စာရွက်လို ပါးပါးလေး တစ်ခု ဟာ ပြတ်ရှ မှူကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုစာရွက်လေး က တောင် ဒီလို ဖြစ်နိုင်သေးရင် အိတ်တစ်လုံး က ဘယ်လောက်ထိ ဒုက္ခပေးနိုင်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ထိုင်ခုံအောက်မှာသေချာစွာထားပေးပါ လျှင် လေယာဉ်ပျက်ကျချိန် မှာ အိတ်ဟာ ထိုင်ခုံ အောက်မှာ တင် ခုန် မှာဖြစ်လို့ လူကို ထိခိုက်နိုင်မှူ နဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် အိတ် တွေ က လွယ်သောကြိုး ဆွဲသောကြိုးတွေ ရော အိတ်တွေ ကိုယ်တိုင်ကရော ထိုင်ခုံ အောက်ထဲမရောက်လျှင် အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ သင်တို့ ရဲ့ ရုတ်တရက်လေယာဉ်ပေါ် က ထွက်ခွာပြေးမှူမှာ အနှောက်အရှက်ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
ထီးအရှည်တို့ လမ်းလျှောက်တုတ်ကောက်တို့ ကတော့ အပေါ်က အကန့်ထဲမှာသေချာသိမ်းဆည်းပေးရမှာပါ။
အိတ် တွေ အများကြီး သို့မဟုတ် အကြီးကြီး ဖြစ်နေရင်လဲ အပေါ်ဖက်က ပစ္စည်းထားရာ အကန့်ထဲမှာထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သေသေချာချာ မသိမ်းရင်တော့ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြုံ မှ နောင်တရပါလိမ့်မယ်။
အိတ်ကြီးလွန်းရင် သို့မဟုတ်များလွန်းရင် နေရာကျပ်ပြီး ခုံအောက် က အသက်ကယ်အင်္ကျီ ကို အလွယ်တကူ ယူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော့ Flight ပေါ်မှာ မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့ ချက်ချင်း ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ Safety နဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ် က မိန်းမတစ်ယောက် က အိတ်ကိုပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားပြီး မသိမ်းနိုင်ဘူးပြောပါတယ်။ ထိုင်ခုံအောက်မှာ မသိမ်းချင်တာ က Gucci အိတ်အသစ်လေး မလို့တဲ့။ အဲဒီတော့ အပေါ်က အကန့်မှာထဲ့ဆိုတော့ လဲ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးပါလို့တဲ့။ ၃ကြိမ် ၃ခါ ကျွန်တော်တို့သတိပေးပါသော်လည်း မလိုက်နာ၍ လေယာဉ်မှူး ကို လေယာဉ် ဂိတ် သို့ပြန်မောင်းစေကာ လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်း ကနေ ဒီ အမျိုးသမီးကိုခေါ်ချသွားပါတယ်။
သူဌေး မတစ်ယောက်မို့ တရားစွဲ ပါသော် လည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းစည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ က နေ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှရပ်တည် ပေးခဲ့လို့ သူ တရားစွဲတာ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
SAFETY ကြောင့်ပြောဗသာ စကားများ ကို လိုက်နာပေးကြပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အားနေလို့ အပိုတွေ လိုက်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ ချစ်လို့ ပြောတယ်လို့ သာ သဘောထားပေးကြပါနော်။
နားလည်ပေးလိုက်ကြပါအေ…. မော်ဒယ်ဖြစ်မှ လိမ်ပြန်စီးဘူးတယ်ထင်ပအေ…. ဟဟဟဟဟ အံ့သြဘ…
မလိုအပ်ဘဲနဲ့တော့ သတ်မှတ်တာမဟုတ်လောက်ဘူးဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အလိုက်သင့်နေပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှဘဲ သေချာအကျယ်တ၀င့်သိရတော့တယ် ဒါကြောင့်ကိုးးးးးးးးးး
ဟုတ်တယ် ဦးခ ရ အရင်တုန်းကဒီလို လုပ်ပါ ဆိုလို့သာ ဒီလို လုပ်လိုက်တာ။ ဘာမှန်း ကို မသိခဲ့ပါဘူး။
အခု အဲ့ဒီ မော်ဒယ်ဂဲလ် ပွစိ ပွစိ ထ လုပ်တော့မှ ပဲ ဂယက် ရိုက်ပြီး သိတဲ့ တတ်တဲ့ လူတွေ ရှင်းပြတာ ဖတ်ရတာ ဆိုတော့ကာ ဒင့် ပဲ ကျေးဇူး တင်ရ မလိုလိုး)
airplane mode ပြောင်းထားတယ်ဆိုလဲ ခရီးသည်တိုင်းကို လိုက်စစ်ဖို့ မလွယ်ဘူးလေ..။ ဒီတော့ သေချာအောင် ကွင်းအတက်အဆင်းမှာ ပိတ်ခိုင်းတယ် ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖုံးထဲကနေ နားကြပ်နဲ့ သီချင်းနားထောင်လို့ရတဲ့ ခေတ်မှာ ဖုံးပြောတာနဲ့ သီချင်းနားထောင်တာ ဘယ်လိုသွားခွဲမလဲ..။ လေထဲရောက်မှ ကိုယ်လိုရာ ပြန်သုံးခွင့်ရှိပါတယ်။ ဖုံးတင်မက ကွန်ပြူတာတွေပါ အတက်အဆင်းလုပ်ချိန် ပေးမသုံးပါ။
လုပ်နိုင်တာ သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့.. ဖုံးမပိတ်လည်း လေယဉ်အမှုထမ်း ညွှန်ကြားချိန်မှာ နားကြပ်ဖြုတ် ဖုံးကို အိတ်ထဲသိမ်း၊ ကွန်ပြူတာပိတ်ချင်ဟန်ဆောင်ထားပေါ့..။ လေယဉ်ပေါ်မှာ လေယဉ်အမှုထမ်းတွေ တာဝန်ရှိသူဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့..။ ငါကွ